“Ngiye kunezimpande ifoni yami. Manje lokho? Ngenzenjani bazuzani ukhula lwenkohlakalo egcwele?” Lona umbuzo ezivamile yilabo nje kunezimpande amafoni abo. Empeleni, ngaphambi kokuthi siyikhiphe ifoni yakho, ungase ufune ukwazi ukuthi yini zokusebenza, Roms kanye nezinye izinzuzo ungathola kusuka ukhula lwenkohlakalo egcwele. Futhi lapha Yingakho kufanele baqede ifoni yakho ye-Android.
Kuyini impande kusho?
Izingozi ukhula lwenkohlakalo egcwele efonini yakho
Indlela ukuvula bootloader yakho
Umenzi Ifoni unezela njalo zokusebenza ayo efonini avamise kumakwe njengokwenziwe izinhlelo zokusebenza zesistimu yingakho alikwazi ukukhishwa (isb: Samsung sika Umculo Hub, Incwadi ihabhu njll). Zingase lwenza ukuthi iselula yakho ingasheshi futhi hlala inkumbulo futhi isikhala. Ngokufinyelela impande, ungakwazi ukuqeda kubo.
Overclock noma underclock CPU
Nge uhlelo lokusebenza like SetCPU, ungakwazi ukulawula ijubane processor kwefoni yakho ngokuqalisa Overclocking (setha CPU max yakho imvamisa ephakeme kunenani bayo obujwayelekile) noma underclocking (bawubeka ngaphansana imiz ukubaluleka kwayo). Overclocking kuyasiza uma ufuna ukusebenzisa uhlelo lokusebenza ukuthi idinga izidingo eliphezulu. Nakuba underclocking kusiza ekutholeni ukuphila kwebhetri kangcono.
Isibonelo, ungakwazi benza processor yakho overclocked uma udlala ihluzo khudlwana imidlalo, kodwa abanaye ukudweba angenalutho amandla okungenani lapho isikrini sivaliwe.
-Google enza ngayo umsebenzi ezinhle ukugcina oxhumene nabo, mail, imiyalezo, amakhalenda, izithombe, zokusebenza nokunye-Google-y izinto ukuze. Kodwa nge uhlelo lokusebenza ngokuthi titanium Backup, hhayi kuphela isipele zonke izinhlelo zakho zokusebenza, kodwa futhi kungaba isipele yonke idatha elondolozwe ku labo zokusebenza.
Thola izibuyekezo kusheshe
abakhiqizi yefoni Android njalo bathathe izinyanga ukukhulula izibuyekezo zakamuva ze-Android (futhi namanye amafoni ngisho abanandlela uthuthukise). Uma i-Google imemezele Lollipop, mhlawumbe Kwakusazofika uthole JellyBean. Ngakho kungani wena namanje elinde OS yakamuva uma ungavele baqede ifoni yakho bese ke manje? Gubani ukubekezela?
Ngokuvamile umphakathi kunjiniyela Android bayakwazi ukuthola OS entsha ungene ezinyangeni ifoni phambi yenethiwekhi kudedela buyekeza. Uma usungene kunezimpande, wena nje kudingeka uthole version OS ufuna futhi uyifake (elungiselelwe idivayisi yakho ethize).
Nge lokusebenza awesome Tasker, elisebenzisa "uma lokhu, ke ukuthi "isimo sengqondo, ungenza ifoni yakho genius. Kungaba ngokuzenzakalelayo konke efonini yakho. Isibonelo, ungakwazi ngokuzenzakalelayo ukuthulisa ifoni yakho ebusuku, Ukuvula i-Wi-Fi yakho uma usekhaya, mawuvuleke umculo lokusebenza uma ukuxhuma Bluetooth yemoto yakho. Empeleni, akadingi ukufinyelela impande, kodwa uma simile, ke kuningi ongakwenza kunalokho enikucabangayo. Ukuze uthole olunye ezishintshayo ugqozi, Hlola lapha.
flash a ROM ngokwezifiso
Lona omunye izinzuzo ezingcono kakhulu ukhula lwenkohlakalo egcwele. A siko ROM inguqulo ngokwezifiso Android ngokuyisisekelo, kungase inguqulo isitokwe Android, ingeza izici ezimbalwa Ukugunda, unezela eziningi izici ezivelele ngempela, noma ushintshe Android yakho kusukela ekhanda kuye ozwaneni. By indlela, CyanogenMod kuyinto rom ethandwa kakhulu ukuthi abantu abaningi baba kumaselula abo.
Inothi: Awunayo empeleni badinga ukufinyelela impande flash a ROM ngokwezifiso, Nokho uzodinga Vula bootloader yakho (inqubo ukuthi ngezinye izikhathi iza izikhwebu nge ukufinyelela impande). Futhi kufanele njalo wenze amakhophi agade umonakalo ngaphambi kokufaka noma yimuphi ROM, ngoba kungase kudingeke nokuba Sula yonke idatha isilondolozi efonini yakho ngaphambi kokufaka i-ROM.
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, kunezinye izinzuzo ukuthi ungakwazi umbe wedwa. Ekupheleni, Enginakho ukukukhumbuza ukuthi kucedvwa ngeke isitini ifoni yakho kuze kube phakade, ngakho-ke sicela niqaphe ngazo zonke izindlela. Kodwa ngicabanga ukuthi kuwufanele ingozi.
Posted on July 6, 2015 Agasti 26, 2015 Umbhali WillIzigaba Umsuka Amadivayisi AndroidAmathegi isipele, impande android
Langaphambilini post Previous: Yini eyenza “Umsuka A Ucingo” Ukuthini
Next post Next: Ingabe Likhona Izingozi baqede An Kudivayisi Android